CIQAAB: Min Tottenham, PSG, Chelsea Ilaa Man City- Lixda Kulan Ee Cadaabta Ah Ee Qaabayn Doona Xili Ciyaareedka Liverpool Iyo Waqtiga La Ciyaarayo Kulamadan. – GOOL24.NET
CIQAAB: Min Tottenham, PSG, Chelsea Ilaa Man City- Lixda Kulan Ee Cadaabta Ah Ee Qaabayn Doona Xili Ciyaareedka Liverpool Iyo Waqtiga La Ciyaarayo Kulamadan.
Kooxda Liverpool ayaa xili ciyaareedka cusub ee Premier league ku bilaabtay guulo boqolkiiba boqol ah kadib markii ay soo wada guulaysatay dhamaan afartii kulan ee ugu horeeyay waxayna rekoodhkan la wadaagtaa kooxaha Chelsea iyo Watford inkasta oo ay farqiga goolasha hogaanka Premier League ku hayso.
Laakiin kooxda Jurgen Klopp ayaa mari doonta imtixaan ciqaab ah marka ay hadda ku soo laabtaan garoomada kubbada cagta iyada oo la soo gaba gabeeyay fasixii kulamada caalamiga ahaa ee xulalka qaramada aduunka. Liverpool ayaa gali doonta kulamo qaabayn kara sida uu xili ciyaareedka kooxdeedu noqon doono.
Liverpool ayaa mari doonta kulamo aad u adag oo waliba wax go’aamin kara waxayna ka bilaabi doontaa kulamada shanaad ee Premier league ee todobaad sabtida ka bilaamaya la ciyaari doono.
Haddaba halkan kaga bogo Xogta Kulamada Ciqaabta ah ee qaabayn kara Xili Ciyaareedka Liverpool iyo Waqtiga Kulamadan La Ciyaari Doono:
1-September 15 – Tottenham Vs Liverpool (Marti)
Liverpool ayaa Wembley Stadium ku booqan doonta kooxda Tottenham kulamada shanaad ee sabtida la ciyaari doono waana kulankii ugu horeeyay ee tijaabo adag u noqon doona kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool iyada oo waliba la ogyahay in Tottenham ay 3-0 ku soo garaacday Manchester United oo Old Trafford joogtay.
Kooxda Mauricio Pochettino oo markale isku dayaysa in ay koobka Premier league u tartanto xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah ayaa soo dhawayn doonta Liverpool oo aan wali guuldaro soo arag laakiin natiijada kulankani waxay tijaabo cad u noqon kartaa Liverpool.
Tottenham ayaa guuldaro kala soo kulantay Watford oo ay 2-1 dhibcihii ugu horeeyay ku soo lumisay laakiin Liverpool ayaa kulankan iskeeni doonta iyada oo ka cadhaysan guuldardii 4-1 ka ahayd ee ay Reds xili ciyaareedkii hore kala soo laabtay kulankii Tottenham ee Wembley Stadium.
2-September 18 – Liverpool vs Paris Saint-Germain (Minan)
Imtixaanka labaad ee Liverpool sugaya isla todobaadka bilaami doona waxa uu noqon doonaa midka ugu xoogan iyada oo Liverpool soo dhawaynaysa kooxda PSG waxayna Reds wajihi doontaa halista Neymar, Edinson Cavani iyo Kylian Mbappe ee kulanka ugu horeeya heerka Groupyada UEFA Champions League.
Liverpool oo xili ciyaareedkii hore soo gaadhay finalkii Champions League oo ay Real Madrid guuldaro kala soo laabtay laakiin markale waxay UEFA Champions league ku bilaaban doontaa kulan xaasaasi ah iyada oo PSG soo dhawaynaysa September 18.
3-4: September 29 – Chelsea (Miman iyo Marti)
Liverpool ayaa kadib kulanka PSG waxay u safri doontaa kooxda Southampton laakiin lix maalmood gudahood waxay Chelsea la ciyaari doontaa laba kulan oo kan hore uu Anfield ka dhici doono September 26 iyada oo ay iskaga hor iman doonaan EFL Cupka wareegiisa saddexaad balse markale Liverpool ayaa September 29 waxay booqan doontaa Stamford Bridge si ay kooxda Sarri ula soo ciyaarto kulan Premier league ah.
Maalmahan ayay Liverpool gali doontaa mashquul waali ah iyada oo Klopp uu u baahan doono ciyaartoyda kooxdiisa oo dhamaystiran maadaama oo uu saddex tartan ciyaarayo isaga oo waliba kulanka EFL Cupka shaxdiisa isbadalo ku samayn doona.
5- October 3 – Napoli (Marti)
Liverpool ayaa sidoo kale kulankeeda martida ah ee ugu horeeya ee UEFA Champions League waxay booqan doontaa kooxda Napoli ee horyaalka Talyaaniga waxayna Reds wajihi doontaa kooxda Carlo Ancelotti oo guulo ka soo gaadhay Lazio iyo AC Milan intii uu horyaalka Serie A socday, waxayna Reds sii wadan doontaa kulamada adag ee ay dhexda ugali doonto.
6- October 7 – Manchester City (Minan)
Imtixaanka Liverpool ayaa gadhi doona heerkiisa ugu danbeeya marka ay Liverpool soo dhawayso kooxda koobka Premier league difaacanaysa ee Manchester City oo markale isku dayi doonta in ay ka baxdo inkaarta 20 sano ku dhawaaadka ku soo haysatay Anfield ee ayna guusha ku soo gaadhin.
Liverpool ayaa ahayd kooxdii Premier league ee kaliya ee xili ciyaareedkii hore saddex guuldaro oo layaableh baday Manchester City kadib markii ay afar kulan isku arkeen Premier league iyo Champions League. Kadib markii ay City kulankii ugu horeeyay ee Etihad Stadium ay soo xasuuqday Liverpool oo Sadio Mane casaan laga siiyay wixii ka danbeeyay wuxuu noqday taariikh.
Liverpool ayaa Anfield ku soo gumaaday Man City kulankii lugtii hore ee sideed dhamaadkii halka ay markale Etihad Stadium guul 2-1 ah ugu gaadhay sidaana waxay City kaga tuurtay markabkii Champions League, balse markale Guardiola iyo Klopp ayaa Anfield ku kulmi doona October 7.
Haddii Liverpool ay ugu yaraan kulamadan ka hesho natiiyoojin fiican waxaa lagu ogaan karaa inta ay awoodeedu gaadhsiisan tahay iyo sida ay ugu tartami karto koobabka ay qaybta ka tahay.